DF oo golaha ammaanka u gudbisay dacwad xasaasi ah oo ka dhan ah KENYA - Caasimada Online
Home Warar DF oo golaha ammaanka u gudbisay dacwad xasaasi ah oo ka dhan...
DF oo golaha ammaanka u gudbisay dacwad xasaasi ah oo ka dhan ah KENYA
New York (Caasimada Online) – Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan (Abuukar Baalle) ayaa Golaha Ammaanka u gudbiyay caddeymo muujinaya duqeymo Diyaaradaha Dagaalka Kenya ay ka geysteen Gudaha Soomaaliya.
Abuukar ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya dilal iyo dhaawac ay duqeymaha Kenya u gaysteen haween iyo caruur Soomaaliyeed, wuxuuna Kenya ku eedeeyey dambiyo dagaal.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa dhowaan sheegay in Kenya aysan duqayn ka fulin karin Soomaaliya, yadoo aan marka hore lagu war gelin taliska Amisom iyo dawladda Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa shalay sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu furi doonto safaaraddeedkii magaalada Muqdisho kadib soo jeedin ka timid dowladda federaalka Soomalaiya.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Kenya ayaa sidoo kale lagu casuumay safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu kusoo laabto Nairobi, oo uu dib u billaabo howlihiisa.